Sargaal kasoo goostay dagaalyahanada Al Shabaab oo lasoo bandhigay | Allbanaadir.com
Home NEWS Sargaal kasoo goostay dagaalyahanada Al Shabaab oo lasoo bandhigay
Degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa lagu soo bandhigay sargaal la sheegay in uu katirsanaa dagaalyahanada Al Shabaab kana soo xoogstay kooxdaasi sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka dowlada.
Taliyaha Ciidamadda ka howlgala degmada qoryooley Col- Cali Waal iyo Taliyaha Ciidamadda AMISOM ayaa soo bandhigay sargaalkan kasoo goostay Al Shabaab, waxa uuna sheegay Col Cali Waal in sargaalkan si iskiis ah isku soo dhiibay.
Taliyaha ayaa tilmaamay in ay soo dhaweeyeen sargaalkan uu tilmaamay in uu kamid ahaa raga Al Shabaab u qaabilsan degmada Qoryooley iyo deegaanada ku dhaw dhaw, waxa uuna ugu baaqay dagaalyahanada kale ee Al Shabaab in iyana isa soo dhiibaan.
Dowlada Soomaaliya ayaa marar badan soo bandhigtay xubno kasoo goostay dagaalyahanada Al Shabaab, kooxda Al Shabaab ayaana inta badan looga baran in ay ka hadlaan xubnaha la sheego in ay kasoo goostaan ee lasoo bandhigo.
Previous articleSirdoonka Kenya oo shaaciyay bartii Al Shabaab ka abaabuleen weerarkii Dusit D2
Next articleCali Rooba oo shaaciyay in Wadooyinka Mandheera 50% ay maamulaan Al Shabaab